Dhaqaatiir Maraykan ah oo Jubbaland balan qaad u sameeyay. | XAL DOON
Home ENGLISH Dhaqaatiir Maraykan ah oo Jubbaland balan qaad u sameeyay.
Dhaqaatiir Maraykan ah oo Jubbaland balan qaad u sameeyay.
Dhakhaatiir ka socota howlgalka Maraykanka ee qaarada Afrika oo loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa maanta booqday Isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo, muhiimadda booqashadooda ayaa ahayd in ay kuurgalaan xaaladda Isbitaalka.
Wasiirka caafimaadka Jubbaland Mursal Maxamed Khaliif iyo Agaasimaha Isbitaalka Kismaayo Xuseen Sheekh Qaasim ayaa Dhakhaatiirta kusoo dhoweeyey Isbitaalka islamarkaana uga warbixiyey xaaladda uu ku shaqeeyo.
Dhakhaatiirta ka socota howlgalka Maraykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in ay kormeer iyo qiimayn kadib gacan ka geysan doonaan sidii Isbitaalka Kismaayo loo ballaarin lahaa looguna dhamaystiri lahaa dhammaan adeegyada caafimaad ee uu u baahan yahay.
Wasiirka Caafmaadka Jubbaland Mursal Maxamed Khaliif ayaa uga mahad celiyay booqashadooda waxa uuna sheegay in kulamo muhiim ah Madaxda Jubbaland la qaada doonaan inta ay ku suganyihiin Magaala Xeebeedka Gobolka Jubbada Hoose ee Kismaayo.